Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal डा. सुरेन्द्र केसीको दाबी : यो एमसीसी कहिल्यैपनि कार्यान्वयन हुँदैन् - Pnpkhabar.com
डा. सुरेन्द्र केसीको दाबी : यो एमसीसी कहिल्यैपनि कार्यान्वयन हुँदैन्
काठमाडौं, १८ फागुन : राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले एमसीसी पनि महाकालीजस्तै कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने दाबी गरे ।
उनले एमसीसीमा भारतको पनि सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भोलि भारतले स्विकृति नदिए के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने–‘एमसीसीलाई लिएर हामी यहाँसम्म लड्यौं। मैले त सुरुमै यो एमसीसी भन्ने वस्तु नेपालमा नभएर छोड्ने छैन भनेको थिएँ । एमसीसी यो माओवादी केन्द्रले ल्याएको हो ।
यसमा संलग्न नभएको कोही छैनन् भनेर अस्ति गगन थापाले संसद्मा सबैको नाम नै लिएर भने । तर, एमसीसीबारे जनतामा धु्रविकरण बनाउने काम भयो ।
व्याख्यात्मक घोषणा गरेर फेरि नेपालीलाई झगडा गराउने काम भयो । भारतले स्विकृति दिने कुरा पनि बाँकी छ ।
भारतलाई झ्वाँक चल्यो भने स्विकृति दिँदैन्। मोदीले ईपिजीको प्रतिवेदन नै बmुभेन। आफ्नै देशका प्रतिनिधिसमेत बसेर तयार पारेको रिपोर्ट नै मोदीले बुझ्दिन भने । भोलि एमसीसीको विषयमा भारतले मान्दिनँ भन्यो के हुन्छ ?’
केसीले आज हामी एमसीसीबाट अगाडि बढिसकेको भनिएपछि यो कहिल्यै कार्यान्वयनमा नजाने ठोकुवा गरे ।
उनले भने,‘हिजो यहाँ अनमिन आएको थियो, धेरैले त्यतिवेला अब अनमिन फिर्ता जाँदैन भनेका थिए, तर कसो कसो गरेर यहाँका नेताले पठाए, अब एमसीसी भनेको त्यही अनमिनलाई रिप्लेस गर्न आएको हो भन्नेपनि छ, यो फिर्ता जाँदैन् ।
पाँच वर्षभित्र एमसीसी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । योभन्दा उता एक दिन पनि जानुहुँदैन् भनेर जनता सचेत हुनुपर्छ । होईन भने यी नेताले देशमा २५ वर्ष एमसीसी रहने प्रपञ्च गराउँछन् ।
हामीले हात काटेर दिईसकेका छौं । ६ वर्ष पनि हुन नदिउँ । महाकाली कार्यान्वयन भयो त ? २५ वर्ष भैसकेको छ त, यो त होल्ड गर्ने खेल हो । बनाउने भए पहिले नै बनिहाल्थ्यो नि ।’
अहिले नेताहरुलाई सत्ता भए हुने र पद भए हुने अरु केही नचाहिने अवस्था रहेको सुनाए । उनले भने,‘एमसीसी त्यसखालको दृष्टान्त हो । एमसीसी नेपाली जनताले गरेको होईन। तर, अहिले जबरजस्ती रुपमा समाज विभाजित भयो ।
मेलम्ची १३ अर्बको थियो, अहिले ३१ अर्ब पुग्यो यसको लागत, अरुण तेस्रोमा पनि त्यही भयो । अहिले एमसीसीमा जे हो, महाकालीमा ठ्याक्कै त्यही हो । एमालेमा महाकाली हुन्न भन्ने रुझान ल्यायो ।
पछि भारतको आश्वासन पाएपछि पारित को पक्षमा आयो । अहिले एमसीसीमा माओवादी जहाँ थियो, हिजो महाकालीमा एमाले पनि त्यही हो।
प्रचण्डले नेपाली जनतालाई ठूलो च्यालेन्ज दिनुभयो । उहाँले नेपाली जनता राष्ट्रवादी छैनन भनेर अस्तिको पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो । नेपाली नेताहरु आफ्नो अनुकुल राष्ट्रिय मुद्दालाई दुरुपयोग गर्छन् र खेलबाड गर्छन् ।’